चीनले गोर्खाली सेनाबारे चासो देखाएपछि भारतमा तनाव ! नेपालबारे दुष्प्रचारको प्रयास – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/चीनले गोर्खाली सेनाबारे चासो देखाएपछि भारतमा तनाव ! नेपालबारे दुष्प्रचारको प्रयास
काठमाडौं। चीनले गोर्खाली सेनाबारे चासो देखाएको भन्दै अहिले भारतको रक्षा वृत्तमा आतंकको स्थिति सृजना भएको छ । भारतीय मिडिया द इकोनोमिक टाइम्सले यसबारे एक भिडियो रिपोर्ट तयार पारेको छ । रिपोर्टमा चीनको काठमाडौंस्थित दूतावासले चीनको एक गैर सरकारी संस्था ‘चाइना स्टडी सेन्टर’लाई यसबारे अनुसन्धान गर्न भनेको दावी गरिएको छ रिपोर्टका अनुसार काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले चाइना स्टडी सेन्टरलाई नेपाली युवाहरु किन भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ना हुन्छन् भन्नेबारे खोजी गर्न भनेको छ । दूतावासले गैर सरकारी संस्थालाई चीन र भारतबीचको तनावले नेपालमा के कस्तो सामाजिक आर्थिक प्रभाव पारेको छ भन्नेबारे पनि अनुसन्धान गर्न भनेको छ ।
अर्का पूर्वराजदूत रञ्जीत रेले गोर्खा भर्तीबाट नेपालले ठूलो आथिृक लाभ लिइरहेकोले यसको समीक्षा गर्दा धेरै पक्ष सोच्नुपर्ने बताएका थिए । रेले प्रस्ट शब्दमै नेपालका मित्रराष्ट्रसँग भारतको तनाव हुँदा त्यहाँ गोर्खाली (नेपाली) सैनिक तैनाथ नगर्ने कुरा अस्वीकार्य भएको बताएका थिए । यसअघि पटक–पटक चीन वा पाकिस्तानविरुद्धको संघर्षमा भारतले गोर्गाली सैनिक तैनाथ गरेको विषयमा नेपालबाट विरोध हुँदै आएको छ ।